Shaxdan Ayuu Unai Emery Doonayaa In Uu Lixda Kooxood Ee Waa Wayn Ee Premier leauge Uu Xili Ciyaareedka Cusub Kula Tartamo. - Gool24.Net
Shaxdan Ayuu Unai Emery Doonayaa In Uu Lixda Kooxood Ee Waa Wayn Ee Premier leauge Uu Xili Ciyaareedka Cusub Kula Tartamo.
Tababaraha kooxda Arsenal iyo maamulka kooxdiisa ayaa suuqii kala iibsiga ee shalay xidhmay si mug leh uga keensaday ciyaartoy la filayo inay wax badan kusoo kordhiyaan kooxda xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Arsenal ayaa xilli ciyaareedkii hore kusoo dhammaysatay booska shanaad ee miiska kala sarreynta Premier League waxaana intaas u dheeraa inay Final-kii Europe League qaab foolxun ugu hor kuftay Chelsea oo ay xifaaltamaan.
Suuqa xagaagan ayaa ahaa mid ay Arsenal ka heshay xiddigo tayo weyn leh oo ugu muhiimsan yihiin Dani Ceballos, David Luiz, Keiran Teirney & xiddiga ugu qaalisan taariikhda kooxdaas ee Nicolas Pepe.
Haddaba, Kaddib xoojinta weyn ee ay Arsenal soo samaysay shax noocee ah ayay kusoo shirtagi kartaa kulanka furitaanka Premier League ee ay Newcastle United booqanayso ama guud ahaan xilli ciyaareedkaba?
Iyadoo uu haatan tagay Petr Cech, Goolhayaha ree Germany ee Bernd Leno ayaa ah dookha koowaad ee hubaal kusoo bilaaban doona goolka kooxa.
Ainsley Maitland-Niles ayaa haysan doona booska daafaca midig maadaama oo uu dhaawacan yahay Hector Bellerin halka ay wadnaha daafaca ku midoobi doonaan David Luiz iyo Sokratis iyadoo uu booska daafaca bidix galayo Teirney.
Labada khad dhexe ee dambe ayaa la filayaa inay noqon doonaan Lucas Torreira walow uu Granit Xhaka qudhiisu soo gali karo booska iyo Dani Ceballos oo xilli ciyaareed amaah ah kooxda ku qaadan doona.
Kubad sameeya weeraryahanka ka dambeeya ayay u badantahay inuu ka ciyaari doono Mesut Ozil halka garbaja ay ka ciyaari doonaan Aubameyang iyo Pepe iyadoo weeraryahanka dhexe uu ka dheelayo Lacazette.
SIDOO KALE AKHRISO: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda & Waxyaabihii Ay Wargeysyada Ugu Waaweyn Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Arbaca Ah
Si kastaba, Haddiiba aad tahay taageere Arsenal ah miyaad shaxdan u aragtaa mid kooxdaadu ay si dhab ah ugu tartami karto kaddib laba xilli ciyaareed oo ay ka maqnayd kaalmaha sarre ee Premier League?